Geekbench na-ekwu na Apple A13 Bionic bụ chipset kachasị ike | Gam akporosis
Apple's A13 Bionic chip dị ngwa karịa Snapdragon 855 Plus, Kirin 980 na Exynos 9825, dị ka Geekbench si kwuo.
Qualcomm nwere Snapdragon 855 Plus dị ka SoC kacha ike ha taa, ebe Huawei na Samsung na-etu ọnụ maka chipsets ha Kirin 980 y Exynos 9825, n’otu n’otu, dị ka katalọgụ ndị kasị ike. Dabere na Huawei, ihe ọhụrụ na ndị ọzọ dị ike processor na ọ eze ẹkenam na a na-adịbeghị anya mmepe bụ Kirin 990Mana nke a abanyebeghị n'ahịa ma amataghị ya nke ọma na ndụ n'ezie, ọ bụ ezie na anyị nwere olile anya na ọ ga-eju anya.
Anyị maara ihe niile banyere ndị mbụ e kwuru n'elu, nakwa banyere Apple si mobile n'elu ikpo okwu na bụ ugbu na ọhụrụ iPhone 11 nke ụlọ ọrụ. Nke a bụ A13 Bionic, nke yiri ka ọ bụ anụ ọhịa, ma ọ bụrụ na anyị atụkwasị obi na ihe Geekbench kọrọ na otu n'ime ndepụta ndị kachasị nso. Dabere na akara a, ọ bụ ụwa kacha arụ ọrụ ama ama.
Apple amanye ndị injinia ya iji mepụta chipset nwere arụmọrụ pụrụ iche yana ike nhazi ngwa ngwa, nsonaazụ ya bụ A13 Bionic. Emere nke a n'ime iPhone 11 na 11 Pro gosipụtara ụbọchị atọ gara aga Na, dị ka ụlọ ọrụ Cupertino gosipụtara, ọ nwere ike ime ihe ruru 1 puku ijeri arụmọrụ kwa nkeji. A na-enweta nke a site na ekele ya nke nwere isi asatọ na 8.500 ijeri transistors.
IPhone 11 ule na A13 Bionic na Geekbench
Achikota ulo nile nke 7nm + System-on-Chip na a Geekbench otu ule nyocha nke 5,472 na otutu nyocha ule nke 13,769. Ngwaọrụ ejiri ya pịpụta arụmọrụ ya na ya wee hụ etu A13 Bionic siri nwee ike debanye aha ya dị ka "iPhone 12,3", mana anyị maara na ọ bụ iPhone 11.
N'iji ya tụnyere, ọ dị mma ịkọba na Qualcomm's Snapdragon 855 Plus - n'ime Xiaomi's Black Shark 2 Pro - nwetara akara nke 3,623 na 11,367 isi, ebe Exynos 9825 jisiri ike debanye akara nke 4532 na 10,431 isi. Kirin 980, ka ọ dị ugbua, ewerela isi 3,289 na 9,817 na mbụ. O doro anya na A13 Bionic dị elu karịa ihe ndị a niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Apple's A13 Bionic chip dị ngwa karịa Snapdragon 855 Plus, Kirin 980 na Exynos 9825, dị ka Geekbench si kwuo.
All nkọwa nke OnePlus 7T Pro na OnePlus 7T na-leaked
Ichetara Oliver, Benji na Champions? Ọ dị mma, inweela ha na gam akporo yana Captain Tsubasa: Otu Nrọ